नेकपाको सचिवालय बैठकमा गोविन्द केसीका माग ! – www.agnijwala.com
नेकपाको सचिवालय बैठकमा गोविन्द केसीका माग !
१ साउन – पार्टी सञ्चालन नियमावली र विधानको केही प्राविधिक विषय टुंगो लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा नियमावली र विधानबारे छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
वामदेव गौतम कार्यदलले गरेको सिफारिसमा केही विवाद देखिएको नेताहरुले बताएका छन् । कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यलाई गाउँपालिका इञ्चार्ज बनाउने, जिल्ला अध्यक्ष र इञ्चार्जहरु प्रदेश कमिटीमा नराख्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । बैठकमा जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागका विषयमा छलफल हुने बालुवाटार स्रोतले बतायो ।